Uganda oo war kasoo saartay askari ay nolosha uga qabsatay al-shabaab - Hablaha Media Network
Uganda oo war kasoo saartay askari ay nolosha uga qabsatay al-shabaab
HMN:- Afhayeenka Ciiddanka Uganda, Kolonel Paddy Ankunda ayaa ka hadlay xaalladda uu ku sugan yahay Askarigaasi oo muddo haatan laga joogo hal sanno u gacan galay Xarakadda Alshabaab oo iyagu weerar xooggan ku qaaday Saldhigii ay Ciiddanka Uganda ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM ku lahaayeen Deegaanka Jannaale ee Gobalka Sh/hoose.
Weerarkaasi waxay Alshabaab ku dileen 19 Askari, waxayna nolol ku qabsadeen mid ka mid ah Askarta Ugandeseka ee la weeraray
Askarigaas ay Alshabaab u haystaan Maxaabiis Dagaal ayaa waxa uu bishii December ee sannadkii hor ka soo muuqday Muuqaal Video oo ay Xarakadda Alshabaab soo bandhigtay, wuxuuna sheegay inay Alshabaab si fiican ula dhaqmeen.
Inkastoo aysan kala caddayn inuu Askarigaasi weli nool yahay iyo in kale haddana Afhayeenka Ciiddanka Uganda, Kolonel Paddy Ankunda oo la hadlay Wargeyska The Monitor ee ka soo baxa magaalladda Kampala ayaa u sheegay inay ku rajo weyn yihiin inay hal maalin soo badbaadin doonaan Askarigaas
Dhinaca kale Taliyaha Guud ee Ciiddanka Difaaca Uganda, Jeneral Katuba Wamaala waxa uu Wareysi uu bixiyey Toddobaadkii hore ku sheegay in Qalad ay sameeyeen Taliyayaasha XCiiddanka Uganda ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM u sabab noqotay weerarkii ay Alshabaab sannadkii hore ku qaadeen Saldhiggii ay Ciiddanka Uganda ku lahaayeen Deegaanka Jannaale ee Gobalka Sh/hoose.
“Taliyayaasha waxay ku qaldanaayeen in ay Askar tiradooda yar tahay ilaalo ka qabtaan Saldhigaasi oo ay qabsadeen Ciiddamo ka tiro badnaa” ayuu yiri Jeneral Katumba Wamala.
Sidoo kale Guddi Baaritaan oo uu hoggaainayey Sarreeye Guuto Jak Baksumba ayaa sheegay inaysan Taliyayaasha si wanaagsan gacanta ugu qabanin Hawlgalkii looga hortegi lahaa Weerarkii ay Alshabaab bishii September 1-dii ee sannadkii hore ku qaadeen Saldhigii AMISOM ku lahaayeen Deegaanka Janaale ee Gobalka Sh/hoose.
Guddiga Baraitaanka oo booqasho hawleed ku yiid Somalia ayaa sheegay inay 200 Askari joogeen Xeradda Jannaale, isla markaana ay soo weerareen Dagaalyahanno Alshabaab oo tiradoodu u dhexeysay 350 ilaa 500 oo aad u hubeysnaa.
Madaweynaha Uganda, Yoweeri Museveni waxa uu dhowr maalmood kadib Weerarkaasi amray in shaqada laga joojiyo lana xiro Taliyihii Ciiddanka Uganda ee lagu weeraray Deegaanka Jannaale Kolonel Bosco Mutambi iyo Saddex Sarkaal oo kale, kuwaasi oo haatan ku socoto Dacwad la xiriirta Weerarkii Alshabaab ku qaadeen Saldhigga Ciiddanka Uganda ee qeybta ka ah AMISOM ku lahaayeen Deegaanka Jannaale ee Gobalka Sh/Hoose.